kkchha.com:: पूँजीबजारमा किन गयो पहिरो ?
पूँजीबजारमा किन गयो पहिरो ?
आम लगानीको अपेक्षाविपरीत मंगलबार पूँजीबजारमा पहिरो गएको छ । नेप्से परिसूचकमा २४.६३ अंक अर्थात १.४१ प्रतिशतको पहिरो गएको हो । एकाएक बजारमा पहिरो गएका कारण सबै समूहको सूचकमा रातो पोतिएको छ । बजारमा सेयर खरीदको चाप खासै नहुँदा, बैंकहरुले मुद्धती निक्षेपमा बढाइरहेको ब्याजदर, अधिकांश बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लाभांश घोषणा भइसकेको अवस्था तथा पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइरहँदा लगानीकर्ता पर्ख र हेरमा रहेका र चाडपर्वको ह्यांगओभर अझै नसकिँदा समेत बजारमा यसरी पहिरो गएको विश्लेषक बताउँछन् ।
मंगलबार नेप्से परिसूचक १७२४.४९ अंकमा झरेकोछ । क वर्गका कम्पनीमा सर्वसाधारणको खासै चाप नभएका कारण सेन्सेटिभ इण्डेक्स ५.७८ अंकले ओरालो लाग्यो । मंगलबार नेप्सेका ५ समूहमा दोहोरो, एक समूहमा तेहेरो र बाँकी २ समूहमा एक अंकको गिरावट देखियो ।
वाणिज्य बैंक समूहमा २७.०६ अंकको पहिरो गयो । होटल समूह ४३.८४ अंकले घट्यो भने बिमा समूह १२९.६९ अंकले ओर्लियो । विकास बैंकमा १८.४, बित्त समूहमा ४.५३, जलविद्युतमा ४७.३१, उत्पादनमूलकमा ३१.०३ र अन्य समूहमा १.१६ अंकको गिरावट देखियो ।